नेपाली सेनादेखी संगीतसम्म शिवराज गौतमको यात्रा
असार ६, २०७५ बुधबार
लाल बहादुर वि.क । लोकदोहोरी गीतको उदगम स्थल पनि मानिन्छ । धेरै स्वरका धनीहरु जन्माई सकेको नेपालका विकट गाउँहरु मध्यको एउटा गाउँ लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका -१ मा जन्मिएका चर्चित संगीतकार एवम गाएक शिवराज गौतम संग न्युज विहानीका पत्रकार लाल बहादुर वि.कले कुराकानी गर्नुभएको छ ।
तपाईको सांगीतिक यात्रा कसरी र कहाँबाट सुरु भयो ?
मेरो परिवारमा मेरो बुवा देव बहादुर परिवार पनि राम्रो म्युजिसियन हो । उहाँले तत्कालीन समयमा सनाई राम्रो बजाउनु हुन्थ्यो । उहाँ लम्जुङकै एक नम्बर सनाई बाजक पनि हो । त्यो भन्दा पछि थुप्रै मान्छेहरुको जन्म भयो । मेरो बुवा एकदमै राम्रो ख्याती प्राप्त सनाई बाजक भएकोले म उहाँबाट एकदमै प्रभावित थिए । यस्तै मेरो मामाको पनि उत्तिकै प्रेरणा छ मलाई सांगीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको लागी उहाँको नाम किसन बहादुर परिवार हो । उहाँ तत्कालन समयको लोकप्रीय भाका र पछिल्लो समय चर्चा कमाउन सफल डाठो भाका प्रचारक भनेर उहाँ चिनिनु हुन्छ । उहाँ अहिले हामीमाझ हुनुहुन्न । मैले सधै मामाहरुले गाईरहेको सुन्थ्ये । यसैले उहाँहरुकै प्रेरणाले मलाई गाउने ईच्छा जागेर आउथ्यो । म सानो उमेरको हुँदा पनि अलि फरक प्रकारका गीतहरु सुन्थ्य । हुनत म जन्मीएको ठाउँ लोक संगीत क्षेत्रका उदगम स्थल हो । अहिले पनि राजु पविार, विमाकुमारी दुरा लगायतका चर्चित कलाकारलाई जन्म दिएको छ ।
मैले लोकगीतहरु पनी गाउथे तर, म नारायण गोपाल, भक्तराज आचार्य र माणिरत्नका गीतहरु अत्याधिक मन पराउन थाले । पुराना गाएकहरुका ति गीतहरुमा म हराउदै गएको आभास हुन थाल्यो । सधै सुन्दै गए । जव म १५/१६ वर्षको उमेरमा आईपुगे । मेरो रुची परिवर्तन भयो । नेपाली ब्याण्ड गीतहरु मन पराउन थाले । मेरो रोजाईमा नेपथ्य र पुरानो हिमालयन व्याण्डका गीतहरु मन पराउन थाले । यी गीतहरुले ममा अर्को एउटा उर्जा जागेर आयो । विभिन्न कुराहरु परिवर्तन हुने संगतबाट हो भनिन्छ । मेरोपनि त्यहि समय देखी नै व्याण्डका गीतहरु संगको संगत सुरु भयो । मैले विस्तारै आफ्नो जीवनलाई पप र आधुनिक गीतहरुको एउटा मिश्रण जसलाई फ्युजन भन्ने गरिन्छ । यस्ता गीतहरु संग मेरो आकर्षण बढ्दै गयो । म सङ्गितकार अर्जुन पोख्रेलको फ्यान बने । अहिले पनि उहाँकै फ्यान हुँ । उहाँले पुरानो र नयाँ पनलाई मिसाई दिनु हुन्छ । यी गीतहरुलाई नयाँपन दिनु हुन्छ । म उहाँको यहि कलाको कारणले म प्रभावित बनेको छु ।
तपाई लामो समय नेपाली सेनामा रहेर देशको रक्षा समेत गर्नुभयो । सानै देखी संगीतलाई माया गर्ने मान्छे ले । नेपाली सेना रोज्नुको खास कारण के थियो ?
सायद मेरो भाग्यमा नै त्यस्तै थियो । पारिवारको आर्थिक स्थीतिका कारण म नेपाली सेनामा भर्ना हुनु पर्यो । फेरी त्यो बेला सांगीतिक क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य खोज्नु त्यति सजिलो पनि थिएन । यसैले बाध्यता नै भनम म नेपाली सेनामा भर्ना हुन पुगे । संजोग यति राम्रो थियो कि मलाई मेरो भाग्यले राम्रो साथ दियो । नेपाली सेनामा रहँदा पनि मैले सांगीतिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने अवशर पाए ।
त्यहाँ काम गर्दा मैले नेपाली सेनाको संगीत विभागमा रहेर काम गर्ने अवशर पाए । मैले आफु भित्र भएको चाहनालाई स्थलगत रुपमा प्रस्तुत गर्न पाउने एउटा ठुलो अवशर समेत पाए । त्यहि बाट मैले आफ्ना क्षमता विकाश गर्ने अवशर समेत प्राप्त गरे । मैले नेपाली सेनाबाट नै पढ्नको लागी स्कलर सिप समेत पाए । सेनाले ईण्डिया, पाकिस्तान लगायतका देशहरुमा पठाउने गर्छ । मैले ईण्डियामा गएर त्यहाँको एईसी ट्रेनिङ सेन्टरबाट एक वर्ष संगीत सिक्नेअवशर पाए । यस्तै भारतको भुपालमा अवस्थीत बरतुल्लाह ईन्टरनेश्नल कलेजबाट मैले डिप्लोमा गरे ।
तपाईले सांगीतिक क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा कस्तो खालको समस्या भाेग्नु भयो यहाँले ?
आर्मिमा काम गर्ने समय सकियो । मैले पेन्सन पाउन थाले । जुन बेला म आर्मिमै थिए । त्यो बेला पनि मैले आफुलाई कलाकारकै रुपमा प्रस्तुत गरेको थिए । हामीहरुले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति देखी लिएर पुर्व राजाहरुको पालामा आयोजना गरिने रात्री भोजहरुमा सरिक हुन्थ्यौ ।
त्यहि अवशरमा हामीले आफ्नो प्रस्तुतीहरु दिन पाउथ्यौ । सेनामा रहँदा त्यति खुल्लम खुल्ला अधिकार हुदैन । धेरै खुलेर बाहिर आउन पाईदैन । त्यसैले मैले यदि सेनाको जागी छोडे भने म एउटा राम्रो कलाकारको रुपमा आफुलाई स्थापित गराउने छु । जब बाहिर आए दुनीयाँ धेरै बृहत रहेछ । म यहाँ सम्म पुग्नको लागी धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो । अहिले मैले जागीर छोडेको ४ वर्ष पुरा भयो । वितेका दुई वर्षमा सांगीतिक माहोलमा म आफै कहाँगएर अल्झिए आफैलाई थाह भएन । त्यसपछि विस्तारै आफ्नो परिचय बनाउदै गए । सबैतिर जोडिदै गए अहिले आफुले चाहेका गीतहरु रेकर्ड गर्न सक्ने माहोल सिर्जना भएको छ । पहिले भन्दा आफैलाई अलिक सहज बनेको छ ।
तपाईले कलाकारितामा आफुलाई यसरी सेनामै रहेर स्थापीत गर्नुको पछाडिको खास रहस्य के छ?
म सानै देखी चन्चले थिए । सबैसंग हास्ने बोल्ने र अरुलाई हसाउने एकदमै चटपट भन्दानी हुन्छ । म त्यस्तै थिए । आफैलाई कहिलेकाहि यस्तो लाग्छ कि भगवानले मलाई एउटा प्याकेज बनाई दिएका हुन । म सबै संग मिलनसार थिए । सबैसंग आफ्नो भाका सजिलै मिलाउन सक्ने म संग कला थियो । १२/१३ वर्षको उमेरमा पनि मैले ६०/७० वर्षको बुढापाकाहरु संग सजिलै आफ्नो कुरा मिलाउन सक्थ्य । मलाई रमाइृलो भनेपछि औधी मन पथ्र्यो । त्यसैले कहिँ कतै त्यस्तो माहोल देखभने म तुरुन्तै आफुले सक्ने जति गर्थे । गाउँमा पहिले बुवाहरुले पञ्चेबाजा बजाउदा सबैभन्दा पहिले नाच्ने म नै हुन्थ्य ।
तपाई एक दलित परिवारमा जन्मेको मान्छे हो । जातिय छुवाछुतले तपाईलाई कत्तिको असर गर्यो नी ?
यो सबैलाई हो मलाई मात्र हैन जातिय छुवाछुतले धेरै नभएपनि थोरै किन नहोस असर चाँहि गरेको छ । अहिले पनि मेरो परिवार पिँडित छ । घरवाट बाहिर निस्कने बाटो पाएको छैन । पहिले जतिबेला त्यहाँ एउटा कुलो थियो हामीले त्यसैलाई बाटो बनाएर हिँड्थ्यौ । अहिले नक्सामा हेर्दा त्यो कुलो रहेनछ । यसैले मरो घर खेतको विचमा भएकाले अर्काको आगनमा भएर हिँडुन पाईदैन । मेरो बुवा ८० वर्षको हुनुभयो उहाँलाई पनि थाहा छैनकि त्यो कुलो कहिले बनाईयो भनेर ।
तपाईले गीत संगीतको क्षेत्रमा कत्तिको सफल्ता पाइरहनु भएको छ ?
राम्रो पाईरहेको छु । म खास स्टेज पर्फर्म भएकाले स्टेज कार्यक्रमहरुमा बेस्त नै छु भन्न पर्छ । मैले स्याक्सोफोन खासमा अझै राम्रो बजाउने गरेको छु । मेरो संगीत क्षेत्र अलि फरक छ । हामीले पाश्चर्य संगीत गर्छौ । यसको प्रभाव विस्तारै पुवृतिर पनि पर्दै गएको छ ।
सांगीतिक क्षेत्रमा छुट्टा छुट्टै खालको सेक्टरहरु छन् । यी कलाकारहरुले एक अर्का प्रतिको जुन व्यवहार छ । यसलाई कसरी सुधारिनु पर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?
यसलाई सुधारिनु आवश्यक छ । हामीले एक अर्काप्रति घृणाको नजरले होईन माया र सद्भावको नजरले हेर्नु पर्छ । हामी कलाकार भनेको सबै एउटै हौ । हामीले विभिन्न क्षेत्रमा रहेर आफ्नो कलालाई प्रस्तुत गर्ने गर्छौ यसैले सबैले एक अर्का प्रति मायाको सदभाव बढाउनस पर्छ । यसले हाम्रो कलाकारिता क्षेत्रको विकाशमा सहयोग गर्नेछ ।
यस्तै पछिल्लो समय नेपालमा पश्चिमी कल्चरको सिको गर्ने क्रम बढिरहेको छ । यसले लोक सांगीतिक क्षेत्रलाईअलि असर गरेपनि पछिल्लो पिँडिको मन जित्न सफल भएको छ । अर्को कुरा गीत संगीतहरु तयार गर्दा हामीले आफ्नो कल्चरका कुराहरुपनि विर्सिनु हुदैन भन्ने मलाई लाग्छ । यसलाई जिवित राख्नै पर्छ । तर, पाश्र्च संगीतहरुलाई हुबहु कपि गर्न भने हुदैन ।
अन्त्यमा तपाईले भन्नै पर्ने केहि छुटेका कुराहरु छन् ?
म अन्त्यमा भर्खरै बजारमा आएको मेरो गीत मायाको आभाषलाई सबैले हेरीदिनु होला । तपाईलाई पक्कै पनि मन पर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छु । जसमा मेरो आफ्नै शब्द र स्वर रहेकाे गीतमा संगीत अर्जुन पोख्रेल रहेको छ । यस्तै यो गीतको एरेन्जर आर्यन खाति हुनुहन्छ । यस्तै गीतमा सुसील नेपाली, कृष्ण भुजेल, सुस्मीता पुन र उषा पुनको अभिनय रहेको छ भने यो गीतकाे छाँयांकन नेत्र गुरुङ्गले गर्नुभएको छ । मैले न्युज विहानी मार्फत सबैलाई सम्झीन चाहन्छु । साथै तपाईले मेरो गीतलाई चर्चाको शिखरमा पुर्याउनु भएको छ, यसको लागी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यावाद दिन चाहान्छ । साथै विशेष गरेर न्युज विहानीका पत्रकार लाल बहादुर विक सहित न्युज विहानी पनि धेरै धन्यावाद मलाई मेरो केहि कुराहरु राख्ने अवशर प्रदान गर्नुभयो । आगामी दिनमा पनि तपाईको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।
प्रदेश ४ ले निर्माण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला
उपत्यकामा मनाइने इन्द्रजात्रा आजदेखि विधिवत रुपमा शुरु
एएफसी महिला फुटबल च्याम्पियनसिपः नेपाल र म्यानमार आज भिड्दै
एसिया कपः अफगानिस्तानले बंगलादेशलाई १३६ रनले हरायो
मलेसियामा विषाक्त मदिराले मृत्यु हुने नेपालीको संख्या ६ पुग्यो (सूची सहित)